पार्टी विवादमै वित्यो ओलीको चारवर्ष : विकास बजेट चौथाई मात्रै खर्च ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
पार्टी विवादमै वित्यो ओलीको चारवर्ष : विकास बजेट चौथाई मात्रै खर्च !
ओलीको सकसपूर्ण सत्ता
जनजीवन बाढीपहिरो र कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमसँग जुधिरहेका बेला सरकारले भने ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन
२०७८ असार ३, बिहीबार २०:३९:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने हरेक सम्बोधनमा देशमा विकासले फड्को मारेको दावी गर्छन । तर विकास बजेट खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । जसका कारण विकासले गति नलिएको प्रष्ट छ । चारवर्ष देखि सत्ता नेतृत्वमा बसेपनि खास विकासमा कुनै पनि छलाङ मार्न सकेको छैन । नयाँ आयोजना समेत सुरु हुन सकेको छैन ।
विगतमा नेकपा पार्टीको झगडामा व्यस्त भएका ओली अहिले एमाले पार्टीको एकता मिलाउनमा व्यस्तछन् । तर मिलाउन सकेका छैनन । माधव समूहले हरेक दिनजसो नयाँ नयाँ माग राख्दै आएका छन् ।
असार लागेसंगै देशभर बाढीले वितन्डा गरिरहेको छ । कतै शहरमै बाढीपसेर सयौको संख्यामा स्थानीयहरु घरवार बिहिन बनेको छ ।वर्षासँगै देशका कैयौं भागमा बाढीपहिरोले जनजीवन प्रभावित गरिरहेको छ । अर्कोतिर कोभिड–१९ को संक्रमण पनि मत्थर भइसकेको छैन ।
जनजीवन बाढीपहिरो र कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमसँग जुधिरहेका बेला सरकारले भने ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले त्यसको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेको छैन ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलको १ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नौ खर्ब १८ अर्ब ३८ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कूल बजेटको ६२.२६ प्रतिशतमात्र हो ।
अर्थात् अझै ३७.७४ प्रतिशत अर्थात् अब पाँच खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नै बाँकी छ । चालू आवमा सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसारै खर्च गर्ने हो भने अब दैनिक १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ ।
चालू आव सकिन अब ३० दिनमात्र बाँकी रहेको हुँदा चालू आवको बजेट वक्तव्यअनुसार खर्च गर्न दैनिक ठूलो परिमाणमा बजेट खर्चिनुपर्ने देखिएको हो ।यद्यपि, चालू आवमा खर्च गर्नेगरी लक्ष्य लिइएको बजेटको आकारअनुसार खर्च नहुने देखेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् बजेटको आकार घटाइसकेको छ । जसअनुसार चालू आवमा सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बजेट घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोडमा झारिएको छ । यो सुरुवाती बजेटको ९१.१९ प्रतिशत हो । चालू बजेट सोचेअनुसार नै खर्च हुने स्थिति देखिएको छ । चालू बजेटमा विनियोजित चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोडमध्ये हालसम्म सात खर्ब १ अर्ब ७६ करोड खर्च भइसकेको छ ।
मयो विनियोजित बजेटको करिब ७४ प्रतिशत हो । भलै अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् चालू बजेटको आकार करिब चार प्रतिशतले घटाएर नौ खर्ब १४ अर्ब ६८ करोड पु¥याइएको छ ।तर, विकास बजेट भनिने पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था भने निरासाजनक छ । बजेट विनियोजन गर्दा पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड छुट्याइएको थियो ।
कूल बजेटमै चौथाइभन्दा कम आकारमा झारिएको पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च पनि आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा आधाभन्दा कम छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएकोमध्ये हालसम्म पुँजीगत एक खर्ब ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेट आकारको ४०.६५ प्रतिशत हो ।
खर्च नहुने अनुमानपछि अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् पुँजीगत बजेटको आकार २० प्रतिशतले झारेर दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड पु¥याइएको थियो । तर, यसरी घटाइएको बजेटको पनि ठूलो हिस्सा खर्च नहुने देखिएको छ ।
यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा १ असारसम्ममा ४२.३४ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
२० प्रतिशत राजस्व लक्ष्य बाँकी
लक्ष्य नभेट्नेजस्तो देखिए पनि खर्चको तुलनामा भने आम्दानी भने सन्तोषजनक नै छ । बजेटको मुल स्रोत राजस्व संकलन १ असारसम्म ८०.४ प्रतिशत पुगेको छ ।चालू आवमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।तर, त्यसमध्ये ८ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संलकन भइसकेको छ । कुल संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ सात खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड, गैरकर राजस्व ५३ अर्ब ९९ करोड, अनुदान १० अर्ब सात करोड र अन्य आम्दानीबाट ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा र अन्तिम महिनामा ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतझैं यसवर्ष पनि देखिएको छ । अन्तिम महिनामा ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि विगतमा संसदीय समितिदेखि आयोगहरुले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकार आफैंले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन तथा निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । तर, यो प्रवृत्ति सुधारिन सकेको छैन ।दुई वर्षअघि सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।